विचार / बिमर्श | EduKhabar
नेपालमा वार्षिक पाँच लाख भन्दा बढी युवा जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । उनीहरू मध्ये करिब २३ प्रतिशत मात्रै कुनै न कुनै सीप लिएर प्रवेश गर्ने अवसर पाएको देखिन्छ । अर्थात् श्रम बजारमा प्रवेश...
गत वर्षको बजेट मार्फत् सरकारले ‘२०७६ देखि २०८५ सम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशक’का रुपमा काम गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसकै आधारमा चालु वर्ष तीन सय विद्यालय भवन र क...
यतिखेर विश्व कोरोना महामारीबाट आतंकित छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । परीक्षणको दायरा बढाएसँगै संक्रमितको संख्या अझै बढ्ने देखिएको छ । प्रयत्न धेरै भईरहेका समा...
गणित मानव जिवनको महत्त्वपूर्ण बिषय हो । सबैजसो दैनिक क्रियाकलापहरूमा यसको प्रयोग कुनै न कुनै रूपमा भई नै रहेको हुन्छ । गणितको प्रयोग नभएको कुनै पनि विषय छैन होला । गणितज्ञ ब्याकनले भनेका छन् "गणि...
३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला बलात्कार काण्ड, वाइडबडी जहाज खरीद काण्ड, ललिता निवास काण्ड, यति काण्ड, सेकुरिटि प्रिन्टिङ्ग प्रेस काण्ड, ट्रान्सपरेन्सी ईण्टरनेश्नलका अनुसार भ्रष्टाचार गर्ने मुलकमा नेपाल १२...
शिक्षकका गुण र सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ सुधार हुन नसक्नुको कारण
शिक्षक - ना. (सं.) शिक्षा दिने वा विद्यालयमा पढाउने व्यक्ति, अध्यापक, गुरु, मास्टर - नेपाली बृहत शब्दकोष शिक्षकको अर्थ कति सम्म गहन छ भन्ने कुरा शब्द बाट नै थाहा हुन्छ । शिक्षकका बारेमा बताउन पर्य...
ह्यूमन राइट वाच डग का अनुसार कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को धेरै असर बालबालिकामा देखिने छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार १.५ बिलीयन भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । साथै यस महामारीको असर धनि...
शिक्षक कासमू : तत्कालको उल्झन् हटाएर मात्रै पुग्दैन, थुप्रै नीतिगत सुधार जरुरी
कार्य क्षमताको आधारमा बढुवा हुने शिक्षकको मूल्याङ्कनमा ३५ प्रतिशत अङ्कभार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको हुन्छ । यसको पूर्तिका लागि शिक्षकले हरेक बर्ष बैशाख मसान्त भित्र आफू कार्यरत विद्यालयमा फाराम भरेर...
समाज मनोविज्ञानले किन भन्छ – ‘जाबो शिक्षक !’
कोरोना भाईरस कोभिड १९ को महामारीको बेला शिक्षाका कुरा बेमौसमी जस्तो लागे पनि यो विषय गम्भिर हो । अहिलेको संकट सँधै भरी त पक्कै रहँदैन ! अहिले देखि नै शिक्षाका विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने संकट स...
आफ्नो अयोग्यता छोप्दै, शिक्षकलाई पढाउँदै !
जब जब शिक्षाका सन्दर्भमा चर्चा, बहस र छलफल शुरु हुन्छ सबैको निशानामा पर्ने एउटै पक्ष छ – शिक्षक ! शिक्षकले गरेन, शिक्षकले गर्दा भएन, शिक्षकले यसो गर्न पथ्र्यो, शिक्षकले उसो गर्नु पथ्र्यो भनेर...
मुन्द्रे परीक्षा : भुत्ते चलन किन गर्नु पर्यो ?
पचासका दशक भित्रका दुई फरक फरक वर्षमा घरका दुई भाइले एसएलसी पास गर्यौं । आँबैका लागि दाइ निकै प्रिय नाति हुनुहुन्थ्यो । पास भएको खबर आफै दाइ स्वयंले ल्याउनु भयो । मेरो सम्झनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय...
रोकिएका परीक्षा बहस र विकल्प
चीनको वुहानबाट शुरु भई महामारीका रुपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाईरस कोभिड १९ संक्रमणको जोखिमका कारण सबै क्षेत्र अन्योलमा छन् । जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उपायका रुपमा गत चैत ११ गतेबाट शुरु लकडाउन सँगै परीक...
सामुदायिक विद्यालयका कुरा
नेपालमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुमा पछिल्ला दिनहरुमा सरोकारवालाहरुको आकर्षण बढ्दै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अभिभावकहरु सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वसनीय बनेका छन् जसले विभिन्न सामुदायि...
शिक्षाका बाधक पक्ष, कारण नखोज्ने हो भने दोहोरि रहने निश्चित
शिक्षाको अधिकार संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । ती अधिकार कार्यान्वयन हुन पुराना कानुन धेरै हदसम्म बाधक छन् । एउटा उदाहरण हेरौं – शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको । यसको कूल ३५ अंकमा सबै भन्दा...
स्वउपचार शिक्षाको खाँचो
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले यतिबेला संसार आक्रन्त छ । यो रोगको उपचारको लागि विश्वसनीय औषधी पत्ता लगाउने प्रयत्न जारी भएता पनि अहिले सम्म सफलता भने हासिल भएको छैन । रोग लागिसके पछि यसको...